UroCoin စျေး - အွန်လိုင်း URO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို UroCoin (URO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ UroCoin (URO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ UroCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $49 565.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ UroCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
UroCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
UroCoinURO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.231UroCoinURO သို့ ယူရိုEUR€0.195UroCoinURO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.176UroCoinURO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.21UroCoinURO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.05UroCoinURO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.45UroCoinURO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.09UroCoinURO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.857UroCoinURO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.306UroCoinURO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.322UroCoinURO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.08UroCoinURO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.79UroCoinURO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.25UroCoinURO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹17.28UroCoinURO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.38.98UroCoinURO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.317UroCoinURO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.353UroCoinURO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.19UroCoinURO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.6UroCoinURO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥24.61UroCoinURO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩274.08UroCoinURO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦89.18UroCoinURO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽16.82UroCoinURO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.31
UroCoinURO သို့ BitcoinBTC0.00002 UroCoinURO သို့ EthereumETH0.000601 UroCoinURO သို့ LitecoinLTC0.00425 UroCoinURO သို့ DigitalCashDASH0.00254 UroCoinURO သို့ MoneroXMR0.00259 UroCoinURO သို့ NxtNXT18.01 UroCoinURO သို့ Ethereum ClassicETC0.034 UroCoinURO သို့ DogecoinDOGE66.64 UroCoinURO သို့ ZCashZEC0.0028 UroCoinURO သို့ BitsharesBTS7.11 UroCoinURO သို့ DigiByteDGB7.39 UroCoinURO သို့ RippleXRP0.82 UroCoinURO သို့ BitcoinDarkBTCD0.00796 UroCoinURO သို့ PeerCoinPPC0.766 UroCoinURO သို့ CraigsCoinCRAIG105.22 UroCoinURO သို့ BitstakeXBS9.85 UroCoinURO သို့ PayCoinXPY4.03 UroCoinURO သို့ ProsperCoinPRC28.97 UroCoinURO သို့ YbCoinYBC0.000124 UroCoinURO သို့ DarkKushDANK74.11 UroCoinURO သို့ GiveCoinGIVE500.17 UroCoinURO သို့ KoboCoinKOBO52.61 UroCoinURO သို့ DarkTokenDT0.213 UroCoinURO သို့ CETUS CoinCETI666.99
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 07:00:03 +0000.